Izindlela ezi-6 ezihamba phambili ezizokwandisa ukubamba iqhaza kwenhlolovo yakho yamakhasimende | Martech Zone
NgoMgqibelo, Agasti 27, 2016 NgoMgqibelo, Agasti 27, 2016 UMike Jones
Ukuhlolwa kwamakhasimende kungakunika umbono wokuthi amaklayenti akho angobani. Lokhu kungakusiza uzivumelanise nezimo, futhi ulungise isithombe sakho somkhiqizo, futhi kungakusiza futhi ekwenzeni izibikezelo mayelana nezidingo nezidingo zabo zesikhathi esizayo. Ukwenza ucwaningo kaningi ngangokunokwenzeka kuyindlela enhle yokuhlala uphambili kwejika uma kukhulunywa ngamathrendi nokuthandwa amaklayenti akho.
Ukuhlola kungakhuphula nokwethenjwa kwamakhasimende akho, futhi ekugcineni, ukwethembeka, ngoba kukhombisa ukuthi unentshisekelo yoqobo embonweni wabo, futhi wenza umzamo wokuwanelisa. Qiniseka ukuthi wazisa amaklayenti akho ngezinguquko ozenzile, ngokuya ngempendulo yazo. Ngaphandle kwalokho, imizamo yakho iba sengcupheni yokungabonwa. Abantu bavame khumbula kangcono okuhlangenwe nakho okungalungile kunezintandokazi, ngakho-ke ukuthuthuka kungahle kunganakwa, ngoba amakhasimende akho kungenzeka anethezeke kakhulu. Ngokufanayo, kungabuyisa amanye amaklayenti owalahlile, uma phambilini babengenelisekile ngebhizinisi lakho.
Impendulo enhle ekuhlolweni kwamakhasimende nayo ingaphindeka kabili njengokubuyekezwa kwenkampani. Kuyindlela engcono kakhulu kune kushicilelwa izibuyekezo ezikhokhelwe noma eziceliwe. Qiniseka ukuthi ucela imvume kumakhasimende akho, ngaphambi kokuthatha isinqumo sokwenza izimpendulo zabo zibe sesidlangalaleni, noma ngabe ucwaningo alwaziwa.
Kukhona isayensi ephelele yokwenza ukuklama imibuzo emihle, ezigwema izimpendulo ezibandlululayo, futhi zilawule ukubamba impendulo ethembekile yabantu ababambe iqhaza ocwaningweni. Ngeshwa, kunezinto eziningi ezizothonya izimpendulo zamakhasimende akho, futhi eziningi zazo zingaphezu kwamandla akho. Ngokuya ngokuthi yiluphi ulwazi obheke ukuluthola, ungahle ufune ukubabuza ngempendulo ngokushesha ngemuva kwesipiliyoni ofuna ukusihlola. Izimpendulo zizothinta imizwa ngoba ababambiqhaza bazokhumbula ngokucace kakhudlwana isipiliyoni sabo. Ngakho-ke basengaphansi kwethonya lemizwa abazihlanganise nayo.
Uma ufuna imininingwane ethe xaxa, kungcono ukuthi unikeze amakhasimende akho isikhathi esithile, ngaphambi kokuthi uwavotele. Lokhu kubanikeza ithuba lokuhlola isimo ngokucacile. Izimpendulo abazinikezayo ngeke neze zibe nenhloso yangempela, kepha lokhu akuyona into onentshisekelo ngayo nganoma iyiphi indlela. Amaklayenti akho adinga ukwaneliseka, okokuqala nokuphambili, futhi ukwaneliseka akuyona inhloso.
Ubude Bokuhlola Amakhasimende
Uma ufuna ukuzuza kakhulu kunhlolovo yakho, ungenzi uhlu lwemibuzo olusebenzela amakhasi, namakhasi. Amakhasimende akho angahle abe nesithukuthezi, bese eqala ukuphendula ngaphandle kokucabangela imibuzo, ukuze nje akwenze. Ngokufanelekile, ucwaningo lwakho alufanele lube nemibuzo engaphezulu kwengu-30. Futhi kufanele kuthathe cishe imizuzu emihlanu ukuqeda.
Uma unemibuzo engaphezu kwengu-30 okufanele uyibuze, noma uma ifomethi yemibuzo ithatha imizuzu engaphezu kwengu-5 ukuyiphendula, cabanga ngokuhlukanisa uhlu lwemibuzo lube yizinhlolovo eziningi. Bahlukanise ngokwetimu yabo, ukuze wazi ukuthi ufunani.
Imvamisa Yokuhlolwa Kwamakhasimende
Amathrendi nezintandokazi ziyashintsha ngezinga elisheshayo, ngakho-ke kufanele wenze izinhlolovo kaningi ngangokunokwenzeka. Lokhu kunikeza ithuba lokuhlola kabusha ukusebenza kahle kohlu lwemibuzo yakho, bese ungeza kwimibuzo eshiywe ngaphambili.
Ungahle uthande ukuba nocwaningo olubanzi oluhlala lutholakala kuwebhusayithi yenkampani yakho, ukuhlola izinga jikelele lamakhasimende akho lokwaneliseka ngemikhiqizo noma izinsizakalo zakho. Kepha uma ufuna impendulo ethize ethe xaxa, ebhekiswe esihlokweni esithile, kunokuba kufanele ukhangise leyo nhlolovo ngokwehlukana.
Imibuzo Yesivivinyo Samakhasimende
Imibuzo engacacile noma engacacile ibeka engcupheni yokuthola imiphumela yocwaningo lwakho. Isikhathi somhlanganyeli kufanele sisetshenziswe sigxile empendulweni, hhayi ukuthi imibuzo isho ukuthini. Ezimweni lapho imibuzo idida khona, umhlanganyeli angahle athambekele ekukhetheni impendulo ngokungahleliwe. Futhi lokhu kungakha iphethini edukisayo.
Ngaphezu kwalokho, amakhasimende akho angavele anikele kulo lonke ucwaningo futhi, uma ethola imibuzo ingaqondakali. Kufanele bazizwe sengathi bachitha isikhathi esincane kakhulu ukugcwalisa uhlu lwemibuzo, ngakho-ke bazozizwa bathambekele ekubhekeni impendulo ngayinye ngokucophelela.
Ukusebenziseka Kwemibuzo Yekhasimende
Kunezinto eziningi ezizothonya indlela amakhasimende akho aphendula ngayo ucwaningo lwakho. Ezinye zingaba ezicashile ngendlela osho ngayo umbuzo othile, noma ngabe uyawasebenzisa noma cha amagama angahle abe nesithombe esingesihle esihambisana nawo ngisho nendlela obuza ngayo imibuzo.
Ukuze uthole imiphumela engcono, imiphumela enemininingwane ethe xaxa, uzofuna ukuba nokwehluka okuningi ngendlela owakha ngayo uhlu lwakho lwemibuzo. Ungabuza umbuzo ofanayo ngezindlela eziningi, ukugwema ukucwasana okususelwa kumagama nokuphindaphindwa, futhi kufanele ucabangele ukuxuba iphethini obuza kuyo imibuzo yakho.
Ngemibuzo enezimpendulo eziningi ongakhetha kuzo, cabanga ukuhambisa izinketho nxazonke. Ngaleyo ndlela, uzogwema ukubeka uhlobo lwenqubo kumakhasimende akho, futhi uzowaphoqa ukuthi acabange ngombuzo ngamunye ngawodwana.
Imivuzo Yokuhlolwa Kwamakhasimende
Uma uthola ukuthi amakhasimende akho anqikaza ukuthatha izinhlolovo zakho, cabanga ukubanikeza isinambuzane esincane lapho usuqedile. Izinkampani eziningi zisebenzisa leli qhinga ukukhuthaza amaklayenti abo ukuthi aphendule.
Kodwa-ke, ungabeka engcupheni yokuthi abantu bathathe ucwaningo ukuze bathole umvuzo, ngaphandle kokuxhumana nenkampani yakho. Qiniseka ukuthi ungeza indlela yokuqinisekisa, ukunquma ukuthi bayazi yini ukuthi bakhuluma ngani lapho bephendula imibuzo yakho. Olunye ucwaningo ludinga ukuthi ugcwalise imininingwane ephrintiwe kwirisidi. Ungangeza okuzivelelayo kuwebhusayithi yakho, okunqunyelwe ukucisha ngemuva kokuba kwenziwe isenzo esithile, njengokuhlola esitolo esiku-inthanethi, noma ngemuva kokuchofozwa isixhumanisi esithile.
Khuthaza Impendulo Enemininingwane
Kunoma ikuphi ucwaningo, ngaphandle kolwazi olufunayo, kubaluleke kakhulu ukuthi unikeze amakhasimende akho ithuba lokuthi aveze imibono yawo. Ukuphawula okuningiliziwe kungaba ngumthombo obaluleke kakhulu kunemibuzo enikeza ukukhetha phakathi kwezimpendulo eziningana.
Iphuzu lonke locwaningo ukuthola izinto obungazi ngamakhasimende akho. Imibuzo nezimpendulo eziklanywe nguwe zisetshenziswa kahle uma unentshisekelo yokuthola izinto ezithile, ezingavumeli ama-nuances amaningi.
Amazwana angakunikeza imininingwane obungeke uyibikezele ngenye indlela. Ngeshwa, kunzima kakhulu ukuthi ababambiqhaza bachithe isikhathi sabo bebhala phansi izimpendulo ezinde kunokuzinikeza ithuba lokuthikha ibhokisi. Ngakho-ke, noma ngabe ufuna izimpendulo ezinemininingwane, gcina imibuzo ilula, ngakho-ke abazizwa sengathi bachitha imali eningi kakhulu empendulweni.
Ucwaningo lungaba yithuluzi elibaluleke kakhulu uma kukhulunywa ngokuhlola amazinga okwaneliseka kwamakhasimende, nokubikezela izitayela zesikhathi esizayo. Futhi kukhulisa ukuthembela kweklayenti lakho futhi kufakazele kubo ukuthi ubakhathalele ngokweqiniso, kanye nezinto abazithandayo kanye nokufaka kwabo.
Tags: ubude bocwaningo lwamakhasimendeiminikelo yokuhlolwa kwamakhasimendenokwenza inhlolovo yamakhasimendeimibuzo yocwaningo lwamakhasimendeimivuzo yocwaningo lwamakhasimendeucwaningo lwamakhasimendeUcwaningo
UMike Jones uthweswe iziqu eBoston University, une-MS ku-Mass Communication. Manje usengumbhali wesikhathi esigcwele, ethanda yonke into ephathelene nebhizinisi nobuchwepheshe.